Adihevitra mikasika ny fiavaham-pirenena frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2009 21:55 GMT
Hatramin'ny fiandohany dia efa nahazo tsikera mivaivay na mandritra ny fotoam-pivoriana na amin'ny aterineto ny dihevitra natsangan'ny fitondrana momba ny “Identité Nationale” na fiavaham-pirenena.
Namoaka “topimaso” momba ny vohikala ofisialin'ny fitondrana frantsay debatidentitenationale.fr [Fr] tamin'ny 2 novambra lasa teo ny vohikalan'ny Vaomiera mpanara-maso ny adihevitra debatpublic.net, izay natsangana ihany koa ny andron'ny fivoahan'iry voalohany mba hanamorana ny adihevitra nasionaly momba ny fifindra-monina sy ny fizàrana ao amin'izay toerana naleha. Ary tamin'ny 25 Novambra dia naneho faharanitan-tsaina (tombana) momba ireo lohahevitra nisongadina, tao amin'ny tolo-dohateny manao hoe “Fiavaham-pirenena”: Nanapongatra ny adihevitra taloha i Eric Besson (amin'nyteny frantsay, anglisy ary alemana) ny Panafa Blog.
Fa mandra-pahatongan'ny famehezana hevitra ankapobe, izay kasaina ho vita mandritra ny fivoriana amin'ny 4 febroary (mbola tsy fantatra hoe iza no mitarika azy), dia hita mihasarotra ny manavaka ny hevitra tsy entanim-po amin'ireo efa voatariky ny fanavakavahana.
Koa mba tsy ho lany andro handinika azy ireo isika, dia andao aloha hifantohantsika ny hevitra vitsy dia vitsy momba ity adihevitra ity.
Tsy atao mahagaga raha niely hatrany ampiandohan'ity raharaha ity ny tsaho, ka tafiditra amin'izany ny filazana fa “any ivelany” no itantanana ny vohikala
Araka ny re dieny 8 novambra ao amin'ny lahatsoratr'i Le cri du contribuable (Hiakan'ny mpandoa hetra”) iray :
Nanangana ny adihevitra momba ny fiavaham-pirenena ny minisitry ny fifindra-monina, Eric Besson. Ny olana : nankinina tamina orinasa mieli-patrana manerantany [orita ary manana sampana ao Maraoka] ny fitantanana ny vohikala. Tantanina ao Maraoka izany ny vohikala momba ny fiavaham-pirenena? Mba lalina indray raha izany! nefa tsy ao anatin'ny soatoavin'ny minisiteran'ny fiavaham-pirenena ny fitiavan-tanindrazana, izay tsy nametraka ny fitantanana ny vohikala amina orinasa frantsay…
Ary taorian'izany koa, niseho voalohany tao amin'ny Google sidewiki ity manarkaa ity, ary niely tokoa tato amin'ny aterineto indrindra fa tao amin'ny twitter:
Misy tsaho misisika mafy milaza fa arahina malagasy telo mandray karama 100€ isam-bolana maso ny famoahan-kevitra momba ny fiavaham-pirenena. “Sombim-baovao” sady tsy nisy afaka nanamarina no tsy nisy afaka nitsipaka ny fahamarinany.
Naneho ny heviny i Reflexiums , avy eto Madagasikara :
Eny ho'aho! fa vendrana aho izany, fa tsy maintsy ‘nty sy nday tsara koa io, “mamindra” asa momba ny fiavaham-pirenena any Frantsa ho ana Malagasy ny Frantsay ary ny Malagasy kosa “manome” ny fikarakarana ny fifidianana malagasy any Frantsa, samy mahazo an?
Mazava loatra fa tsy nampiakatra lentan'ny adi-hevitra, izay mety hieli-patrana mihoatra izay tsy nantenain'ny mpikarakara azy akory ny fitsapa-kevi-bahoaka Soisa momba ny minarets, tilikambon'ny moske fiantsoana hivavaka.
Ny bolongana Les mots ont un sens (”Misy heviny ny voambolana”), tamin'ny lohateny hoe “Mampivoraka ny adihevitra momba ny fiavaham-pirenena fa mihamibolisatra hatrany”, dia manolotra ny amboara voafantin'ny
Fanavakavahana mivantana ao amin'ny vohikalan'ny adihevitra nasionaly mikasika ny mahaizy ny frantsay [voasoratra matetika ho fiavahana ato amin'ny lahatsoratra], vava tsy ambina (voafehy na tsia) ataon'ny mpanao politika… tsara lamosina ny minaret Soisa!
ary hoy ny tsoa-keviny :
Amin'ity zavatra mihamifamahofaho hatrany ity, dia indro fa mivoaka ay any ny gloubi-boulga (mofomamy avy amin'ny andian-tantaran'ankizy amin'ny TV) n'ny fankahalana Silamo sy ny fanavakavahana tsy voafehy intsony.
Mihamaro hatrany ny fampanjakana ny fanavakavahana andavanandro. Nefa dia tsy maharototra na iza na iza akory.
Nampiseho ny tsy fahandrasany tantana tamin'ny famoahany antso hanesorana ny Minisiteran'ny fifindra-monina, nosoniavina manampahaizana Frantsay, ny groupe Claris, “vondrona manampahaizana” iray, niorina tamin'ny 2001 mikendry ny “miasa hampahazava ny adihevitra momba ny filaminana (fiarovana)” :
[…] Fotoana izao hilazana ampahibemaso indray, hanohitra ity fakana an-keriny ny hevitry ny firenena, ny tigetra ekena manerantany izay manorina ny fototry ny Repoblikantsika. Miantso ny mponina, ny fikambanana, ny antoko ary ny kandidà amin'ny fifidianan-ko avy izahay mba hitaky miaraka aminay ny hanafoanana ny “minisiteran'ny fiavaham-pirenena sy ny fifindra-monina”, fa mampidi-doza ny demaokrasia ny fisian'io.
Farany, niainga tany amin'ny fiaraha-monim-pirenena tsy nampoizina hanao izany koa ny ohatra. Mpamaham-bolongana sady mpanao gazety mivoaka isan'andro frantsay Le Monde i Eric Azan nitatitra tao amin'ny bolongany Veilleur de Jour :
Niverina any amin'ny toerana tsy niandrasana azy indray ny adihevitra momba ny fiavaham-pirenena, ary naverin'olona, noho ny “fahadalany”, tsy noheverina handray fepetra henjana tahaka izao: Geneviève de Fontenay (lehiben'ny fikarakarana ny Oliravina na Miss France) […]
[…] Nanofinofy ho Oliravina miozolomana frantsay voalohany i Juliette Boubaaya, Oliravina Picardie 2009, tamin'ny alahady 6 Dec. Ary naharenoka an'i Mme de Fontenay ilay hevitra :
“Mikendry ny hahazo ny satroboninahitry ny Oliravina France i Juliette, zanaky ny mpiavy, zafikelina dadabe Alzeriana, mandritra ny fotoana itadiavan'ny mpanao politika sasany hamolavola indray ny fiavaham-pirenena. Izaho manokana dia faly indrindra amin'ny fandraisan'i Juliette anjara mandritra ity fifidianan'ny 6 desambra ity. Ary resantsika indray, manantena aho fa hisy Oliravina France hivoaka avy any Afrika Avaratra mialoha ny hahafatesako. Eritrereto anie ny fiantraikan'izany safidy izany.”
“Inona no tianao lazaina?” hoy ny fanontanian'i Lionel Laparade [mpanao gazetin'i La Dépêche du Midi nanontany azy]
“Tefaka ho an'ireo mpanao politika manao ny fiavaham-pirenena ho entam-barony, setriny goavana tokoa amin'ireo fihetsika masiso. Mahatsiaro ho voaompa hatrany aho isaky ny maheno an'i Besson. Hainy mihitsy ny mihantsy amin'ilay maharomotra.”
(Noankotrihina : Malika Ménard, Miss Normandie 2009, moa no iray tamin'ny voafidy)
Navoakan'i Suzanne Lehn